गठबन्धनपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताः को कहाँबाट चुनाव लड्दै ? कसको पल्लाभारी ? – .:: Welcome to Saurahaonline.com |
गठबन्धनपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताः को कहाँबाट चुनाव लड्दै ? कसको पल्लाभारी ?
१९ आश्विन २०७४, बिहीबार ११:५६
काठमाडौँ, १९ असोज । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयन अब दुई साता बाँकी छ। प्रमुख दलहरुले चुनावी तालमेलका लागि बृहत् गठबन्धन निर्माणदेखि उम्मेदवार छनोटसम्मलाई समानान्तर रुपमा अघि बढाएका छन्। जिल्ला र क्षेत्रबाट केन्द्रमा उम्मेदवार सिफारिस गर्ने क्रम जारी छ।
उम्मेदवार सिफारिसका क्रममा कतिपय शीर्ष नेताहरुको नाम पार्टीको जिल्ला र क्षेत्रीय कमिटीले सर्वसम्मत रुपमा सिफारिस गरेको छ। कतिपयमा भने विवादकै रुपमा पठाइएको छ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार यो पटक एक व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्रको मात्र व्यवस्था छ। जसकारण शीर्ष नेताहरु एक क्षेत्रमा मात्र उम्मेदवारीको तयारीमा छन्।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम डडेलधुराबाट सिफारिस भएको छ। डडेलुधरामा रहेका पार्टीका दुई गुटबाट प्रधानमन्त्री देउवाको नाम प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारका लागि सिफारिस भएको हो।
बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नाम पनि गृह जिल्लामा सर्वसम्मत हुन सकेन। पौडलसहित नेताहरु गोविन्दराज जोशी, शंकर भण्डारी लगायतको नाम तनहुँ १ बाट सिफारिस भएको छ।
कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला कान्छो जिल्ला नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वबाट सिफारिस भएको छ। यसअघि नवलपरासी ५ मा रहेको उक्त क्षेत्र प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरमा जिल्ला विभाजन भएपछि नयाँ जिल्ला बनेको हो।
यसअघि मोरङ ७ बाट निर्वाचित डा. शेखर कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्र निश्चित भएको छैन। अहिले मोरङ ६ निर्वाचन क्षेत्रमा खुम्चिएको छ।
एमालेका शीर्ष नेताहरुको नाममा जिल्ला र क्षेत्रमा सबैमा एकल सिफारिसमा सहमति बनेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा ५ बाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन्। यसअघि ओली झापा ७ बाट निर्वाचित भएका थिए।
रौतहट १ बाट निर्वाचन लड्ने तयारी भए पनि एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालको नाम काठमाडौँ २ बाट सर्वसम्मत सिफारिस भएको छ। २०७० को संविधान सभा निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित नेपालले उक्त क्षेत्र छाडेका थिए। उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका दीपक कुँइकेल निर्वाचित भएका थिए।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल इलमा २ बाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन्। उनी यसअघि इलाम १ बाट निर्वाचित भएका थिए। तीन क्षेत्र रहेको इलाम अहिले दुई क्षेत्रमा समेटिएको छ। क्षेत्र नम्वर १ मा पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङको नाम सर्वसम्मत रुपमा सिफारिस भएको छ।
प्युठानबाट चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको नाम बर्दिया १ बाट सर्वसम्म सिफारिस भएको छ। महासचिव ईश्वर पोखरेल यो पटक पनि काठमाडौँ ५ बाट प्रतिस्पर्धा गर्ने निश्चित भएको छ। यसअघि ०६४ र ०७० को संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा पोखरेल सोही क्षेत्रबाट पराजित भएका थिए।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवन ३ बाट चुनाव लड्ने यसअघि नै घोषणा गरिसकेका छन्।
पछिल्लो वाम गठबन्धनका कारण नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्वाचन क्षेत्र निश्चित भएको छैन। गोरखाबाट चुनाव लड्ने तयारीमा रहे पनि क्षेत्र निश्चित छैन।
गृहमन्त्री समेत रहेका जनार्दन शर्मा पनि कान्छो जिल्ला रुकुम पूर्वबाट चुनाव लड्ने तयारीमा छन्। रामबहादुर थापा तथा कृष्णबहादुर महराको क्षेत्र यकिन भइसकेको छैन।
पछिल्लो तालमेलको सहमति पछि निर्वाचन क्षेत्र निक्र्यौलमा केही समय लाग्ने देखिएको छ।
नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बावुराम भट्टराईले गोरखाबाट चुनाव लड्ने यसअघि घोषणा गरिसकेका छन्। गोरखाका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा एकमा भट्टराई र अर्कोमा माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ चुनाव लड्ने निश्चित भए पनि क्षेत्र स्पस्ट भइसकेको छैन। तालमेलको सिट बाँडफाँडले क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ।
संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यसअघि सुनसरी ५ बाट निर्वाचित भए पनि अहिले सुनसरीमा ४ निर्वाचन क्षेत्र कायम छन्। यादवको निर्वाचन क्षेत्र पनि निश्चित भइसकेको छैन।